Jamà iray maratra mafy voatifitra, tsaboina ao amin’ny hopitaly Loterana Mahajanga, nanomboka omaly. Nisy ny fifandonana tamin’ny dahalo ka izay no nahavotifitra azy io. Ny alin’ny alatsinainy, tamin’ ny 11 ora alina, dahalo sivy lahy no nanafika tanàna tao Ankadirano Kaominina Mangabe, ao avaratra andrefan’i Maevatanana. Lasa tamin’izany ny omby 16 sy ny volamena. Dimy lahy ireo Jamà niambina nandritra io fotoana io, saingy nitsoaka ny efatra raha vao nahita ireo dahalo nitondra basim-borona. Ity lehilahy ity irery no nifanandrina tamin’ireo sivy lahy ka nahavoa azy.
Mpanendaka dimy lahy miaraka amin’ny antsy lava, voasambotry ny polisy.
Tra-tehaky ny polisin’ny boriborintany fahenina teny amin’ny Rocade Andohatampenaka ny roa lahy teo am-panaovana ny asa ratsiny ary mbola hita teny amin’izy ireo ny entana izay nangalariny miaraka amin’ny antsy lava izay nampiasain’ireto farany .
Ny roa lahy hafa kosa dia nataon’ny polisin’ny poste avancé Antaniavo sarika am-pandriana teny amin’ny fonenana misy azy ireo. Nahazo loharanom-baovao ny polisy amin’ny fisiana asa fanendahana eny amin’ny faritra Ankazomanga iny ary fantatra tamin’izany fa ireto roa lahy voasambotra ireto no mpanao izany asa ratsy izany.
Ny iraika lahy farany kosa, nosamborin’ny polisin’ny boriborintany fahefatra tany anaty toeram-pandihizana rehefa nisy olona nahafantatra fa mpanendaka eny Manarintsoa ity lehilahy ity. Mbola tratra teny aminy ihany koa ny antsy izay fampiasany.
Misy amin’ny ireto mpanendaka ireto no efa nisazy in-telo tany am-ponja raha in-droa kosa ny sasany ary izao voasambotra izao indray.